Iidlali zemidlalo zihamba ngokulula kwamantombazana kunye nabafana. Izifundo zevidiyo kwi-intanethi
Indlu yasekhaya Lonwabo
Iidlali zemidlalo - ukuqhuba kunye namandla anamandla
Imidaniso yeeklabhu zanamhlanje - le ngcamango ebanzi, kuba zibandakanya iindlela ezininzi ezahlukeneyo. Iidlali zemidlalo zilungele abantu abakhutheleyo nabanovuyo, abo bathanda umqhubi kunye nokuhamba rhoqo. Ukudlala imibukiso yeeklabhu, awuzukufumana ukuzonwabisa nje kuphela, kodwa ubeka umzimba wakho emzimbeni, ochaphazela impilo yakho. Iiklasi kumidaniso yeeklabhu zingathatha indawo yokuqeqesha ngokupheleleyo. Ngexesha elide umzimba wakho awuba nje uguquguquke, kodwa u-taut, iplastiki. Ngokuqhelekileyo, umphumo ubonakala uvele kwiiseshoni zokuqala - umvuzo ubonakala uthembele, ukuhamba kwendawo kukuba mnandi kwaye kuyamkeleka.
Ziyiphi imidaniso yebhola ebizwa ngokuba yi-club?
Namhlanje kukho izithuba zomdaniso ezingaphezu kwama-ezine kunye nezikhokelo zemidanso yeqela. Nazi ezinye ezithandwa ngabo.
I-hip hop (i-hip-hop) - idanisa kwisigqi esinamandla. Kulo mdaniso, ukunyakaza okufutshane kunye okukhawulezayo kuhlanganiswa ngokunyakaza okuphelileyo kunye neeplastiki.
I-R & B - le ndlela ifanelekile kwabo bangenakucinga ubomi babo ngaphandle kweeklasi zobusuku. Umdaniso weR & B unamandla kunye neplastiki ngexesha elifanayo, udibanisa ukunyakaza kweendlela ezinjenge-hip-hop kunye ne-jazz.
Indlu yenzelwa umculo womculo. Lo mdaniso ubonakaliswe ngokunyakaza okukhawulezileyo nokugqithiseleyo. Esi sikhokelo sifana ne-trance, kuphela ngabadlali bayo ngaphezu kwezinto ezikhankanywe ngokukhawulezayo nezikhawulezayo zenza amaza ahlukeneyo.
Olunye uhlobo lomdaniso womdlalo luyafumaneka kunye ne-sexy Go-Go. Isiseko sokusebenza kwayo sihamba ngokubanzi. Injongo ye-Go-Go ukudansa kukuzonwabisa loluntu. Ubugcisa bomntu ibaluleke kakhulu ekukhethweni kweqela le-Go-Go labadlali. Ukunyakaza komdaniso kufanele kugcwaliswe ukukhululwa, ukulungiswa kwempahla, i-acrobatics kunye neeplastiki. I-Go-Go yakhelwe kungekhona nje ukuzonwabisa, kodwa ukuyihlaziya. Ngendlela, le ndlela idibanisa iingcingo zomdaniso we-jazz, i-ballet, i- oriental ne-Latin American dance.
Ukongeza kwimizila ebhaliweyo, kukho ezinye iindawo ezininzi zemidanso yeeklabhu, umzekelo, i-tectonics, latin, i-jazz, i-plastic strip kunye nabanye. Isitayela ngasinye sifanelekele ingqwalasela-ihlala isigqibo kuphela kwiminqweno yakho.
Iingxoxo zeeklabhu zokufundisa abafana
Amaninzi amaninzi awayithandi amaqela anomsindo kunye ne-discos nje ngokuba bacinga ukuba abakwazi ukudansa. Kule meko, unokucebisa ukuba ungabi namahloni, kwaye uthathe ithuba lokufunda izifundo zemidanso yeglaki kubafana. Iiveki nje ezimbalwa zeeklasi - kwaye uya kuzuza ukuzithemba ngamakhono abo kumgangatho wokudanisa.
Okokuqala, qwabela i-hip-hop - kulula kakhulu ukwenza, kwaye ukunyakaza okuyisiseko kunokudibanisana nomnye nawuphi na umyalelo.
Inzuzo enkulu ye-hip-hop yinto yokuphucula ukuphucula kunye nokungabikho kweemfuno eziqinileyo kwiinkqubo zokwenza ukunyakaza. Yiyo kanye into efunekayo namhlanje, nje ukuqala ukufunda iindlela ezintsha. Unokudansa ngaphandle kokukhathazeka ukuba uya kwenza iphutha, ungafaki unyawo lwakho apho okanye ungagqiba ukujika. I-Hip-hop kufanele idansa, idilizwe ngokupheleleyo kumculo kwaye iphulaphule oko umzimba ufuna ngethuba elithile: gxuma, uphendule, wenze ukuhlaselwa - i-hip-hop inika inkululeko epheleleyo.
Kukho ukuhamba ezimbini ezisisiseko kwi-hip-hop - oku ku-kach kunye nesinyathelo. Ukuqala ukufunda i-hip-hop ngokuchanekileyo ukufunda ezi zinto ezisiseko.
Ngoko, masiqale uqeqesho kwaye senze umgangatho: imilenze isetyenziswe ububanzi bamagxa kwisikhundla esifanelekileyo. Ngoku siyazigweba ngokupheleleyo kwaye sibuyela kwisikhundla esifanelekileyo. Ungakulibali ngezandla kunye namahlombe - kufuneka ngoku ngeli xesha lijikeleze ngokubhekiselele, ke ukuya ngakwesobunxele, kuze kube sekunene.
Ngoku yenza intsebenzo yesibini eyintloko: setha umlenze okunene kwicala lasekunene ukuze i-sock ibheke ngaphandle. Ngoku uyiguqule kwaye udlulisele ubunzima bomzimba wakho kuwo. Jikela umzimba ngakwesobunxele uze ugobe ngoku umlenze wesobunxele, kunye nekhohlo elifanelekileyo, ume kwizwane zakho. Emva koko unciphise idolo elifanelekileyo kwaye uxoke umzimba wonke nge-arc. Ngelo xesha, zama ukuchukumisa umgangatho ngesandla sakho. Phinda uhamba uze ufumane umphumo oyifunayo.
Izifundo zevidiyo kwiidlabhu zeeklabhu zamantombazana
Yonke intombazana iphupha ukukhanya kumgangatho wokudanisa. Ukunyuka okungahambiyo kunye nokuvulekileyo kwangoko kutsalela imbonakalo yabantu. Kodwa akusiyo wonke umntu onobubele onobuchule obunengqiqo kunye neeplastiki. Kule meko, sincoma ukuba uye kwiiqeqeshwe ezizodwa okanye izifundo zokudansa zeeklabhu zamantombazana e-intanethi.
Ukuba ufuna ukufunda indlela yokwenza ingqalelo ngesini esahlukileyo kunye noncedo lomdaniso, thobela ingqalelo ye-Go-Go-lo mdaniso uza kukuvumela ukuba ukhululeke. Ubonakala ubukhenkce ekusebenzeni kwanoma yimuphi umdaniso-omude okanye omfutshane, oncinci okanye ngeefom ezintle.
Makhe siqale ukuphindaphinda kweemeko ezibalulekileyo ze-Go-Go, kwaye kuqala siza kwenza isigaba sokuqala samanyathelo, ngaphandle kokuba kunzima kakhulu ukucinga le ndlela ngokubanzi. Ezi nyathelo ziyakwenziwa ngelixa zidansa kwi-nightclub okanye ziqhuba kwisigaba.
Thatha indawo yokuqala yokuma: faka iinyawo kumgama we-5-7 cm kwenye. Ngoku sihamba phambili, inzwane encinane kwinqanaba lomlenze olwahlukileyo - cinga ukuba uhamba ngomgca, kodwa ubeke unyawo lwakho ngaphandle komgca ngokwawo, kodwa oko. Ngoko senza amanyathelo amabini phambili, ngokuqala ngonyawo onyawo. Senza isinyathelo sesithathu ngelinye ilanga lekunene, kodwa sesele sishiya eceleni. Izandla kule bhinqa kwiingqungquthela uze ufake ikhwelo.
Le ntshukumo ye-Go-Go ingaba nzima ngokujikeleza ngokulula kwamagxa, udibanise ekupheleni kwintlambo ephethe umgca wezantsi ngezandla zakho. Lo mdlalo womdaniso ukhangelekile kwaye uyamkeleka, ngakumbi ukuba intombazana sele ide, inwele, kodwa ilula.
Hambisa izandla zakho kumdaniso womdlalo
Umdaniso weklabhu kunzima ukucinga ngaphandle kokuhambisa izandla zakho. Ukunyakaza kwakhe okuyisiseko kusekelwe ngokuchanekileyo ekujikelezeni kwezandla - umzekelo, i-hip-hop efanayo, apho, ngexesha lokuguqula, udansa nje amanyathelo ukusuka enyaweni ukuya enyaweni, ngelixa iingalo ezinqamlekileyo zengalo zidibanisa. Yiyo mahi ebonisa isigqi somdaniso.
Ukuba uqala nje ukufumana iingoma zomdlalo, kodwa sele sele ufuna ukusebenzisa izakhono ezifunyenweyo kwiphathi, kunokukunzima ukuhlangabezana nokuhamba kwezandla kunye neenyawo ngexesha elifanayo. Ukuze uzive uthembele, unike umculo wakho ngokupheleleyo - vumela imilenze kunye nezandla zenzeke ngokunyuka, kwaye ngezinye iinkalo ziyancedisana. Ngoko umdaniso wakho uza kujonga uluntu.
Ukufunda umdaniso weklabhu kunokwenzeka kwaye kuyimfuneko kumntu ngamnye namhlanje. Izakhono ezisisiseko ziya kukuvumela ukuba uzive uthembele kwinkampani nayiphi na imithendeleko, kuba akukho holide inokuyenza ngaphandle komculo.
Unokuziqhelanisa nezinye izitayela zemidaniso yesimanje kwinqaku lethu.
Uya kuphi ixesha lokubanda?
Iyintoni imozulu ekulindelwe eMoscow ngoJulayi 2016. Isibikezelo sezulu kwiziko le-hydrometeorological eMoscow kunye nommandla ngoJulayi
Yiyiphi ibusika ka-2017-2018 eRashiya: ukubikezelwa kweziko le-Hydrometeorological Centre
Iholide eholide ngoSeptemba-Novemba
Iparadesi kubathengi: iimpahla zokuthenga eItali
Impembelelo yelanga lokukhanya kwelanga kumgangatho wokuphumla
Liliphi igama elifanelekileyo leholide ngoFebruwari 23?
Ienkolelo zamabhinqa abakhulelweyo
Umama nentombi - iingxaki kwiintsebenziswano
Ukucoca ngepilisi ebomvu ebomvu
Uhambo lweYurophu ngo-Oktobha
Isonka kunye netamatisi omisiwe
Isaladi ye-ham, ishizi kunye nama-mushroom
Ngaba kukho amaphupho okuprofeta ngokwenene?
Amaswitshisi kunye nama-shrimps kunye noshizi
I-Recipe ye-pizza kunye noshizi
Ipopkin pie kunye nobusi
Iziphumo zokhuphiswano ngo-Matshi 8 ukusuka eLamoda
UDana Borisova wawa ngenxa yokuqhawula umtshato
Yintoni enokunika umntwana oneminyaka elilodwa ubudala
Isaladi enomquba ngeoli yomsedare
Umoya uphapha ngesibindi kunye nelayisi
Izipho zezorhwebo kubasetyhini